IFair Haven Cottage entliziyweni yedolophu yaseStratford - I-Airbnb
IFair Haven Cottage entliziyweni yedolophu yaseStratford
I-Old England ngeyona nto ibalaseleyo! 'I-Fair Haven' yaqala ngo-1837 kwaye isembindini wedolophu. Indawo yokuzalwa kukaShakespeare yimizuzu emi-3 nje uhambe. Buyela umva xa ungena kule ndawo yokuhlala inomtsalane enezakhelo zamaplanga kunye neefestile zebhanti.
Yothuswa njengoko ivula indawo enomoya kunye nekhaphukhaphu enegadi yakho ebiyelweyo yabucala. Le ndlu yayikade iyi-'2 phezulu, 2 phantsi' kodwa iye yandiswa kumgangatho osezantsi ukuze ibandakanye ikhitshi, igumbi lelanga kunye negumbi lokuhlala. Umgangatho ophezulu unamagumbi okulala ama-2 anegumbi lokuhlambela likaJack kunye noJill. Ngeentlobo ngeentlobo zeekhefi, iivenkile zokutyela, iivenkile kunye neendawo ezinomdla zikaShakespearean kwimizuzu nje yokuhamba kusoloko kukho into eninzi yokwenza. Nkqu nethiyetha kunye nomlambo kukuhamba ngemizuzu eyi-10.
Indawo enqabileyo-yonwabele ukuphithizela kunye nokuphithizela kwemisebenzi yaseStratford emnyango wakho emva koko ubalekele 'kwi-Fair Haven' uyokuphumla. Kuhle kakhulu ekujongeni iiCotswolds ezintle kunye neelali zabo ezintle kunye nosuku lokukhumbula eWarwick Castle.
Kukho into eninzi yokwenza kanye kumnyango we'Fair Haven' cottage. Buyela emva ngexesha njengoko undwendwela izindlu ezi-5 zikaShakespeare ukuze ubone ukuba uWill wazalelwa kwaye wakhulela phi. Ukhuthazwe zizakhiwo zaseTudor kumbindi wedolophu yonke. Hamba uye elunxwemeni lomlambo iAvon; tsiba kwinqanawa yokuhamba ngenqanawa okanye uqeshe eyakho injini okanye isikhephe sokubhexa ukuze ujonge amanzi ajikeleze iStratford. Umjelo ukwabonelela ngeendlela ezintle zokuhamba emanzini kunye nethuba lokuqesha izikhephe ezimxinwa kwaye uzame isakhono sakho ngezitshixo. Relax kwi-Open Top bus okanye uzipholele kwindawo ezininzi zokutyela kunye neeresityu. Nandipha uyolo lwemarike yaseStratford etsala iindwendwe ezininzi veki nganye. Kwaye kunjalo, kukho iithiyetha - ezinikezela ngeekhenketho kunye nemidlalo yosuku ngalunye, unyaka wonke.
Kwabo banamandla amaninzi kukho iindlela ezininzi zebhayisekile ezibandakanya i-Greenway eneemayile ezi-5 zokukhwela ibhayisekile simahla, nalapho unokuqesha khona iibhayisekile. IStratford ineqela leekhosi yegalufa nayo: Welcome Hills, Tiddington and Snitterfield.
IFama yeButterfly iyintandokazi yokwenene ebantwaneni (kunye nabantu abadala!) njengeMechanical Art and Design Museum. Ipaki enkulu esecaleni komlambo ineendawo zokudlala ezimangalisayo zabantwana kwaye ukuba babanjwe kwishawari 'engaqhelekanga' kukwakho neZiko lezoLonwabo elinemidlalo eyahlukeneyo ekhoyo.
Ungalibali - konke oku kungasentla kukuphosa ilitye ukusuka kumnyango we'Fair Haven'.
Umbindi weNgilani kunye nombindi kuninzi onokukubona nokwenza! Jonga iiCotswolds ezintle kunye neelali zayo ezintle kunye neendawo ezisemaphandleni ezintle; ukonwatyiswa luhambo losuku lokuya eWarwick Castle; ukonwabela ubuhle kunye nomxholo wembali weBlenheim Palace; jonga kwiidolophu ezinembali yentengiso yase-Evesham nase-Alcester; isibindi 'Zonke Izinto Zasendle' - indawo yokugcina izilwanyana enomdla enezidalwa ezingaqhelekanga zokuyibona kufutshane. I-Stratford Armories (ngaphandle nje kweZiko) ikufanele ukutyelelwa kwaye inendawo yokudlala ethambileyo yangaphakathi yabantwana abancinci. Kubathandi beTrasti yeSizwe kukho ubutyebi bezakhiwo kunye nezitiya zokundwendwela, kubandakanya iCharlecote Park kunye neNkundla yaseCoughton.
Uncedo luya kuhlala lunikezelwa kwabo banqwenela nge-imeyile, ngefowuni okanye ngokudibana, ngexesha lokuhlala kwakho. Iingcebiso zomntu zinokunikwa iindawo zokutyelela kunye neendawo zokutyela ezilungileyo zasekhaya.